आहा !आमा छोरीको भन्दा सुमधुर सम्बन्ध सासू बुहारीको,बिधुवा सासुलाई खुशी बनाउन यतिसम्म गर्छिन बुहारी (भिडियो हेर्नुस्) -
Home News आहा !आमा छोरीको भन्दा सुमधुर सम्बन्ध सासू बुहारीको,बिधुवा सासुलाई खुशी बनाउन यतिसम्म...
आहा !आमा छोरीको भन्दा सुमधुर सम्बन्ध सासू बुहारीको,बिधुवा सासुलाई खुशी बनाउन यतिसम्म गर्छिन बुहारी (भिडियो हेर्नुस्)
अहिले सामाजिक संजालमा विभिन्न कुराहरु बाहिर आउने गर्दछन । सामाजिक संजाल त्यसमा पनि टिकटक अहिले निकै लोकप्रिय भएको छ । बच्चा देखि वृद्ध सबै उमेर समुहकाले टिकटक प्रयोग गर्ने गरेका छन ।
यहि टिकटकमा नै अहिले एक सासू बुहारी निकै चर्चामा हरेका छन । उनिहरुको भिडियो धेरैले मनपराएका छन । नेपाली समाजमा सासू र बुहारिको सम्बन्धको बारेमा प्रायजसो नमिलेकै देख्ने गरिन्छ । तर टिकटकमा देखिने एक सासू बुहारिको जोडि भने उदाहरणीय छ ।
बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका ८ घर भएका उनिहरु पछिल्लो समय टिकटकमा निकै चर्चामा रहेका छन । बुहारी शिक्षिका हुन भने सासू घरमै बस्ने गर्दछिन । ६५ वर्षीय सासुलाई टिकटकमा नचाएर खुशी राखेकी बुहारी आफुहरुको सम्बन्ध पनि घरमा यसरी नै खुशी साथ रहने गरेको बताउँछिन ।
बुहारिसगैँ अहिले आफू पनि जानी नजानी नाच्न गाउन थालेको ती सासुले बताउँछिन । साथै बुहारिले नै आफुलाइ यो सब सिकाएकोले आफुले पनि गरेको उनले बताईन ।
आफू १७ वर्षको हुदाँ घरबाट नै मागी बिबाह भएको र त्यो समयमा यसरी अहिले जस्तो स्वतन्त्र नहुने भएकोले आहिले केही समयदेखी मात्र टिकटक चलाउन र भिडियो बनाउन थालेको बुहारी बताउँछिन । मागी बिबाह भएकोले गर्दा पनि श्रीमानसगँ बोल्न हिड्न नै डर लाग्ने साथै घरमा सासुसगँ पनि त्यस्तै हुने भएकोले पनि एक वर्ष सम्म कहिलेकाही सासुसगँ लुकेर भिडियो बनाउने गरेको बुहारी बताउछिन ।
श्रीमान भने ईन्डियन आर्मी भएकोले घरमा सधै नहुने हुदाँ सासुसगँ डर र लाज दुबै भएर त्यसरी लुकेर बनाउनु परेको उनको भनाई छ । सासुले भने आफुले बुहारिले त्यसरी लुकेर नाच्दै भिडियो बनाएको थाहा पाए पनि नदेखे जस्तो गरेर हिड्ने गरेको बताउँछिन । आफुले बुहारिलाई कहिल्यै पराई जस्तो ब्याबहार नगरी आफ्नै छोरी जस्तो ठान्ने गरेकोले पनि बुहारिले पनि आफुलाई धेरै माया गर्ने बताईन ।
आफ्ना दुई छोरा मात्र भएको र श्रीमान पनि आफू २२ वर्षको हुदा नै बिते पछि छिमेकिहरुले छोरी नभएकोले बुढेसकालमा माया गर्ने कोहि हुदैनन अर्काकी छोरी बुहारी बनेर आएकाले सासुलाई हेरचाह गर्दैनन भन्ने गरेको ती सासु बताउँछिन ।
बुहारिले बुढेसकालमा हेरचाह गर्नुक सट्टा बरु उल्टै छोरालाई नै टाढा बनाउछन भन्दै छिमेकिहरुले भन्दा आफुले भने त्यो त आफ्नो ब्याबहार अनुसार हुन्छ भन्ने गरेको उनी बताउँछिन । तर अहिले बुहारिले छिमेकिले भने जस्तो नगरी आफ्नै छोरी जस्तो गरेर राखेको उनको भनाई छ । सुरुसुरुमा सासुसगँ देखिएर भिडियो बनाउन लाज लागे पनि पछि टिकटकमा थुप्रैले त्यसरी बनाएको देखेर आफुले पनि भनेको बुहारी बताउँछिन । सासुले पनि मानेर जानि नजानी साथ दिने गरेको उनको भनाई छ ।
Previous articleकैलालीमा ट्रकको ठ’क्करबाट महिलाको मृ’त्यु ,ठ’क्कर दिने ट्रकमा आ’गज’नी
Next articleयी बालिका जम्मा २० रुपैयाँको लागि बाढी आएको नदीमा हाम, फालिन् (भिडियो सहित)
काठमाडाैँका यी २० वर्षीय युवकको मोबाइलमा ४६ युवतीको ‘नग्न’ भिडियोः कसरी पार्थे जालमा ? यसरी भयो पर्दाफास !
तासबाटै संसारको भवि’ ष्यवाणी गर्ने पहिलो महिला क्षेमता,जसले क्या, न्सर समेत निको पार्ने ग्या, रेन्टी लिइन (भिडियो सहित)
काठमाडाैँका यी २० वर्षीय युवकको मोबाइलमा ४६ युवतीको ‘नग्न’ भिडियोः कसरी...
तासबाटै संसारको भवि’ ष्यवाणी गर्ने पहिलो महिला क्षेमता,जसले क्या, न्सर समेत...